Palladium Hotel na-enweta akwụkwọ asambodo Autism Center
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » Palladium Hotel na-enweta akwụkwọ asambodo Autism Center
Inweta njem nleta • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa bụ ebe kachasị ọhụrụ iji bụrụ Certified Autism Center (CAC) iji nyere aka hụ na ndị ọbịa na ezinụlọ nwere ụmụaka nwere autism nwere ahụmịhe kachasị mma. Ndị nne na nna nwere ụmụaka na ụdịdị autism na-ahụkarị oge ezumike ka ọ bụrụ ihe ịma aka n'ihi mkpa mmetụta, mmachi nri na nchegbu nchekwa.
Ebe ezumike a, nke dị na Dominican Republic mana na-adọta ndị ọbịa sitere n'akụkụ ụwa niile, tinyere usoro ọzụzụ na asambodo nke International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) nyere. Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20, IBCCES abụrụla onye isi ụlọ ọrụ na ọzụzụ autism maka ndị ọkachamara ahụike na ndị nkuzi ikikere gburugburu ụwa. IBCCES ghọtara na ọtụtụ ezinụlọ nwere ụmụaka nwere mkpa pụrụ iche nwere oke njem ma mepụta mmemme kpọmkwem maka ile ọbịa na njem njem.
“Maka Palladium Hotel Group, ọ dị ezigbo mkpa ịnye ọrụ ụfọdụ akọwapụtara nke na-eme ka mmemme dị ụtọ na nchekwa maka ezinụlọ, ụmụaka na ndị nọ n’afọ iri na ụma yana mmemme agụkọtara ọnụ maka ezinụlọ. Ebumnuche anyị bụ na ezinụlọ ọ bụla nwere nkasi obi na ntụkwasị obi nke ịmara na ụmụ ha nọ na nlekọta dị mma, n'agbanyeghị mkpa ha. Anyị chọrọ iji hụ na ezumike ọ bụla anaghị echefu echefu maka ezinụlọ ọ bụla, “Felipe Martínez Verde, onye isi ndị isi ọrụ-America maka Palladium Hotel Group kwuru.
Ọ bụ ezie na nyocha na-egosi na njem bụ otu n'ime ihe ndị na-akpali akpali ọgụgụ isi maka ndị mmadụ n'otu n'otu, na-enwebeghị nhọrọ ndị a zụrụ azụ na ndị enyerela aka maka ndị nne na nna na-achọ ebe ha nwere ike ịnabata mkpa ha. Ndị otu dịka IBCCES na Palladium Hotel Group na-arụ ọrụ ịgbanwe nke ahụ.
“Anyị nwere obi ụtọ isoro onye ọzọ na-aga nke na-etinye aka n'ezie n'ijere ndị ahụ ozi ozi. Anyị chọrọ ịmepụta nhọrọ njem dị mma, nke kwekọrọ ekwekọ maka ndị nne na nna na ndị mmadụ n'otu n'otu, n'ihi ya, ha nwere ike ịga na ebe ndị na-eduga n'ụwa niile wee nwee udo nke uche, "ka Myron Pincomb, Onye isi oche IBCCES kwuru. "Anyị Certified Autism Center designation na-ọdịda nke Premiya òtù ndị dechara rigorous ọzụzụ na izute kasị elu ụlọ ọrụ ụkpụrụ."
Ọtụtụ ebe aga-aghọrọ nhọrọ “autism-enyi na enyi”; n’agbanyeghi, okwu a egosighi ezi nghota nke ihe ndi a choro. Ọtụtụ ndị nne na nna na-achọ ugbu a ebe ha gụchara ọzụzụ na nyocha ọkachamara iji hụ na ahụmịhe kachasị mma. IBCCES mepụtakwara AutismTravel.com, ihe enyemaka dị n'ịntanetị bụ n'efu maka ndị nne na nna nke na-edepụta ebe agaara akara ma jikọta ezinụlọ na ihe ndị ọzọ na ibe ha. Ebe ọ bụla edepụtara na saịtị ahụ ezutela akwụkwọ chọrọ Autism Center, nke gụnyere ọzụzụ zuru oke na ndị ọrụ nyocha na saịtị na-eduzi ndị ọkachamara autism. A ga-edekwa Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa na ndị ọzọ CACs na AutismMember.org, njikọta n'etiti IBCCES na Autism Society iji jikọọ ezinụlọ na ndị mmadụ n'otu n'otu na azụmaahịa na akụrụngwa enyere ndị mmadụ ozi na ụdịdị dị iche iche.
Nyefe Global Standard For Training na Asambodo na Ubi nke Nsogbu Akpịrị - IBCCES na-enye usoro asambodo nke na-enye ndị ọkachamara ikike ịbụ ndị isi n'ọhịa ha ma melite nsonaazụ maka ndị ha na-ejere ozi. A na-amata mmemme ndị a gburugburu ụwa dị ka isi ihe nchịkwa maka ọzụzụ na asambodo na mpaghara nke autism na nsogbu ndị ọzọ na-emetụta uche. Dịka akụkụ nke ntinye aka anyị n'ịkesa ọhụụ ọhụụ na nyocha ọhụụ, IBCCEs na-akwadokwa nzukọ nzukọ International maka Cognitive Research and Disorders iji mepụta ọgbakọ maka mmekorita n'etiti ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Banyere Palladium Hotel Group
Dabere na Ibiza na Balearic Islands, PALLADIUM HOTEL GROUP bụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche guzobere ihe karịrị afọ iri anọ gara aga na ebumnuche nke ịkwalite agwaetiti ahụ na Spain na gafee Europe. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ kwadoro ọnọdụ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ Spanish a kacha mara amara n'ụwa niile. PALLADIUM Hotel Group bụ ụlọ ọrụ ama ama amala nke ukwuu iji kesaa ụlọ oriri na nkwari akụ ya na ịmalite ụdị ọhụụ maka ahịrị ọ bụla, na-agbaso usoro mgbasawanye na-agbanwe agbanwe ma na-emezu ụkpụrụ dị mma. Ka ọ dị ugbu a, otu a nwere ụlọ na plethora nke aga gburugburu ụwa gụnyere Ibiza, Mallorca, Menorca, Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Oviedo, Fuerteventura, Tenerife, Córdoba na Seville na Spain, Sicily na Italytali na ndị Mayan na Nayarit Rivieras na Mexico, Punta Cana na Santo Domingo ke Dominican Republic, Montego Bay ke Jamaica ye Salvador de Bahia ke Brazil.